ဘ၀ရှပ်တိုက်သံများ | ရေခဲငှက်
မိမိကိုယ်တိုင်က ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပါလျက်နှင့် လွင့်ပြယ်ပျက်စီးရခြင်းမှာ ပျက်စီးချိန်တန်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်မည်ဟု ရသေ့စိတ်ဖြေတွေး တွေးမိသည်… မထိန်းသ်ိမ်းမစောင့်ရှောက်၍ ဆုံးရှုံးပျက်စီးရခြင်းထက် စာလျှင်ကား တော်သေး၏ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်မိပြန်သည်. မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်မှ စစ်ပြေငြိမ်းခြင်း မရှိလျှင် အကြင်သူ၏ ဘ၀သည်ကား အမြဲတစေ ပူလောင်နွမ်းလျနေပေရော့မည်ဟု ဘာသာရေးအဆုံးအမ နောက်ခံဖြင့် ဥာဏ်မီသလောက် တွေးတောရင်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်နေမိပြန်သည်…
ထို့နောက် ‘အောင်ပြီ…. အောင်ပြီ… အောင်ပြီ…’ ဟု သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ကြွေးကြော်လေသည်…
ဇူလိုင် (၂၉)၊ ၂၀၀၉
One response to “ဘ၀ရှပ်တိုက်သံများ”
အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့ပေမယ့်၊ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မန့်လေး ချန်ရစ်ခဲ့တယ် အကို၊ အတွေးစများစွာနဲ့ စုရစ်ထားတဲ့ ဒီပို့စ်လေး ဘ၀အတွက် အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ၊ သဘောသဘာဝတစ်ခုအရ ယာယီသံဝေဂတွေသာ ရှိတတ်ကြပြီး အချိန်အတန်ငယ်ကြာတာနဲ့အမျှ မေ့လျော့လေ့သွားကြပြီး ကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါ ပြန်လည် သတိရမိတတ်တဲ့သဘောတွေကြောင့် မကြာမကြာဖတ်သင့်တဲ့၊ ဖတ်ရမယ့် ဘ၀အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပို့စ်လေးပါလို့ ..
ပို့စ်လေးတွေလဲ ပြန်လည်အသက်သွင်းပါအုန်းလို့ …. 🙂